Layma's World: January 2008
မြေဖြူ မှုန့်တွေ မြိုမြို ချနေတဲ့
်လျှောက်နင်းသွားဖို့ဖြန့်ခင်းထားတဲ့
ခဏခဏ ပျက်တတ်တဲ့ အရာမဟုတ်ဘူး…။
ဘ၀ကို တောင် လမ်းခင်းပေးခဲ့သေးတာပဲ
Posted by lay-ma at 2:20 AM 17 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 11:28 PM7comments Links to this post
Free host က ကောင်းကောင်း ဒုက္ခပေးနေပါသည်…။
လေးမ ဘာမှ ဆက်မလုပ်တတ်တော့ပါ…။ဖြစ်ချင်ရာတွေဖြစ်နေပါသည်...။
မနေ့ က တင်ထားသော post နှင့် comment များလည်း အလိုလို ပျောက်ကုန်ပါသည်…။
စိတ်ဆင်းရဲမခံချင်တော့သောကြောင့် ဘလော့ဂ် ရေးခြင်းမှ အကန့် အသတ်မရှိ အနားယူသွားပါပြီ…။
လှည့်လည် စာဖတ်ခြင်းဖြင့်သာ မွေ့ လျော်ပါတော့မည်…။
p.s. အိမ်လှလှလေး လုပ်ပေးထားတဲ့ ကိုအတာရေ.. အရမ်းအားနာပါတယ်… ၀မ်းလည်းနည်းတယ်…။ ဒါပေမယ့် စိတ်ညစ်ရတဲ့ ဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့ဘူး…။ လေးမက အကောင်းနဲ့မတန်ဘူးထင်တယ်..။
Posted by lay-ma at 1:00 AM 13 comments Links to this post
ပုံတွေ ကြည့်ချင်ရင် ဒီမှာ
Travertine ကျောက် တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ Podium လို့ခေါ်တဲ့ ခုံမြင့်ကြီးပေါ်မှာ building အကြီးတစ်ခု … အငယ်လေးတစ်ခုနဲ့ ရေကန်လေးတစ်ခုတင်ထားတဲ့ ဒီ composition လေးကို ယာယီဆောက်တဲ့ ပြခန်းလေးလို့ ကျောင်းသူဘ၀က အံ့သြတကြီး သိခဲ့ရတယ်…။ 1929 မှာ Spain နိုင်ငံ Barcelona မှာ ကျင်းပတဲ့ International Exposition မှာ ဂျာမဏီ နိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု ပြခန်းအတွက် နာမည်ကြီး ဂျာမန် ဗိသုကာ ပညာရှင် L. Mies van der Rohe က ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်…။
အရင်က အဆောက်အဦတစ်လုံး..ရေကန်တစ်ခုလို့ ထင်ခဲ့မိပေမယ့် online မှာ plan တွေ့လို့ သေချာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ရေကန်နောက်မှာ အခန်းငယ်လေးလို့ပြောလို့ရတဲ့ building သေးသေးလေးတစ်လုံးပါနေတာတွေ့ရတယ်…။
တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့ အဲဒီပြခန်းလေးရှိရာကို စိတ်ကူးလေးနဲ့ လည်လည်သွားလိုက်တယ်…။
ရှေ့တည့်တည့်ကမပေးဘဲ ဘေးတိုက်ပေးထားတဲ့ လှေကားထစ်တွေကနေ ရေကန်ကို မျက်နှာမူပြီး တက်လာရကတည်း အေးချမ်းလတ်ဆတ်တဲ့ အာရုံတွေကပ်ညှိလို့လေ…။
Podium ပေါ် ရောက်တဲ့အခါ enclosure ဆိုတဲ့ အကာအရံ ကင်းလွတ်လို့ လွတ်လပ် ကျယ်ပြန့်တဲ့ အမြင့်တနေရာကနေ လမ်းပေါ်ကလူတွေကို စောင်းငဲ့ ကြည့်နိုင်တယ်…။
အမိုးရယ်…အကာရယ်…တိုင်ရယ်ကို …. ဒီအဆောက်အဦမှာ ကွဲကွဲပြားပြား … သီးသီးသန့်သန့် မြင်အောင်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်…။
အခင်းကြမ်း ပေါ်မှာ ထောင့်မှန်ကျထောင်ထားတဲ့ အနက်ရောင် ၊ အ၀ါရောင် နံရံချပ်၊ မှန်နံရံချပ် ၊ ကျောက်နံရံချပ်တွေဟာ အမှီအခိုမဲ့ရပ်တည်နေကြပြီး …ကာတယ်ဆိုတဲ့ အလုပ်တစ်မျိုးပဲ ငါတို့ လုပ်တယ်ဟေ့လို့ အော်ပြောနေကြတယ်..။ ခပ်သေးသေး steel တိုင် ၈ တိုင်ကတော့ “ကျွန်တော်တို့က အမိုးနဲ့ ကြမ်းကြားမှာ ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ ဆက်သွယ်ရေးသမားတွေပါ ” တဲ့…။
အထဲရောက်တော့ နာမည်ကျော် Barcelona chair အဖြူလေးတွေပေါ်မှာ ဟန်ကျပန်ကျ ထိုင်လိုက်ပြီး ….အပြင်ဘက်က လူရုပ် sculpture ကြီးကို အရသာခံ ငေးကြည့်နေမိတယ်…။ အရုပ်တစ်ရုပ်ကလည်း နေရာတစ်ခုရဲ့ တန်ဖိုးကို အတော်ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါလားနော်လို့ တဆက်တည်းတွေးလိုက်မိတယ်…။
တစ်ခါ… ငြိမ်သက်တဲ့ အရောင်တွေကြားထဲမှာ ဘာလို့များ… စူးရှပူလောင်နေတဲ့ အနီရောင် လိုက်ကာကို တပ်ဆင်ထားတာလဲလို့ Mies ကိုမေးချင်တယ်…။
အပြင်ဘက်က ကျောက်ခဲလေးတွေ မြင်နေရတဲ့ ရေကန်လေးဘေးမှာ ခဏထိုင်ပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်…။
ပြန်ရောက်ပြီ..ကွန်ပြူတာရှေ့ကို…။ မိုက်တယ်နော်…ပိုက်ပိုက်မကုန်ဘဲ ခရီးထွက်လို့ရတဲ့ ကမ္ဘာ့ရွာကြီးကို ကျေးဇူးတင်တယ်…။
ခေါင်မိုးနိမ့်နိမ့်လေးနဲ့ ခန့်ညားအေးဆေးငြိမ်သက်တဲ့ အလှကိုဖော်ကျူးလို့ ခေတ်မီ တည်ဆောက်ရေး ပစ္စည်းတွေအကူအညီနဲ့ အမိုး..အကာ…ကြမ်း…တိုင် တို့ကို ကွဲကွဲပြားပြား…ရိုးရိုးရှင်းရှင်း … ဒီဇိုင်းလုပ်ပြသွားတဲ့ ဒီအဆောက်အဦလေးဟာ 1959 မှာ အဲဒီနေရာမှာပဲ ပြန်ပြီးတည်ဆောက်ထားရလောက်တဲ့ အထိ အောင်မြင်သွားခဲ့တယ်…။
ပြပွဲပြီးရင် ဖျက်လိုက်မယ့် ယာယီပြခန်းလေးကို အင်မတန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ steel, glass, marble, travertine တွေနဲ့ အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဗိသုကာရဲ့ စိတ်ကုးနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ကံကြမ္မာကို အားကျမိတယ်…။
လေးမတို့လို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံမှာ ယာယီပြခန်းတစ်ခုအတွက် ဒီလောက်အကုန်အကျခံပေးမယ့်သူရှိပါ့မလား လို့တွေးနေတဲ့ အာရုံထဲကို “ ပေါ…ချောင်…ကောင်း” လေးဆွဲပေးပါဗျာ/ ရှင် ဆိုတဲ့ အသံတွေက လာလာနှောက်ယှက်နေပြန်တယ်…။
Posted by lay-ma at 12:59 AM3comments Links to this post
အသစ်တွေ ဘယ်လိုပြောင်းပေမယ့် အဟောင်းကိုဖြင့်တလည်လည်… ဖြစ်နေတဲ့ လေးမတစ်ယောက် ဒီနေ့တော့ဖြင့် လိုအင်ဆန္ဒတွေပြည့်ဝခဲ့ပါပြီ …။
Blogspot မှာ သုံးခဲ့တဲ့ template ပုံစံနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး တူအောင် လုပ်ပေးသွားတဲ့ လေးမတို့ရွာက လူပျိုကြီး သုံးယောက်နေတဲ့ စပ်မိစပ်ရာ အိမ်မှ ခေါင်သူကြီး မောင်သင်္ကြန် ( နာမည်ကို ငယ်ချင်ယောင်ဆောင်ထားပေမယ့် … လေးမကတော့ ကိုအတာပဲခေါ်တယ်) ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်မ်ိပါတယ်…။ ကောင်မလေးငယ်ငယ်ချောချောချစ်စရာလေးနဲ့ မြန်မြန်လေး လက်ဆက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်…။
ဘက်မလိုက် အရောင် သုံးရောင်ဖြစ်တဲ့ ခဲရောင်၊ အနက်ရောင် ၊ အဖြူရောင် နှင့် လေးမ၏ အသုံးအဆောင်အများစုပိုင်ဆိုင်တဲ့ အပြာရောင် …တို့နဲ့အတူ လေးမ ချစ်သော disney princess များနှင့်ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ လေးမရဲ့ blog လေးကို ဒီနေ့ ဘယ်နှစ်ကြိမ်မှန်းမသိအောင် ၀င်ကြည့်နေမိပါတယ်ရှင်…။ ။
Posted by lay-ma at 12:22 AM 13 comments Links to this post
ခရစ်နှစ်ရဲ့ ပထမဆုံးလဖြစ်တဲ့ ဇန်န၀ါရီလမှာ လောကကြီးကို “ အူဝဲ..အူဝဲ” လို့ စိန်ခေါ်ခဲ့ကြတဲ့ ….
လေးမနဲ့ မွေးလတူ မြန်မာ ဘလော့ဂါတွေ ( သိသလောက်) ကို စာရင်းပြုစုကြည့်တာပါ…။
ဇန်န၀ါရီလဖွားတွေမှာ ဘယ်လိုအရည်အချင်းတွေ ရှိသလဲဆိုတာ သိချင်ရင် သူတို့ ရေးတဲ့ စာတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး အကဲခတ်နိုင်ပါတယ်…။
နှလုံးသားက အထိမခံ .. အရမ်းခံစားတတ်…အရမ်းကြေကွဲတတ် … လွမ်းလည်းလွမ်းတတ်တယ် … အလှအပလေးတွေ မြတ်နိုးတတ်တယ်…. တခါတလေ…ရယ်မောတတ်တယ်…။
ငယ်ငယ်က အရမ်းဆော့တတ်ပြီး… အသက်ကြီးလာတော့ နည်းနည်းမှ အငြိမ်မနေ … အွန်လိုင်းပေါ်တက်ပြီးလက်ဆော့နေရမှ ( ဘလော့ရေးတာ ..လည်တာကို ပြောတာနော်..) ထမင်းစားဝင်တယ်…။
ဇန်န၀ါရီလဖွား မြန်မာ ဗိသုကာများ
၂။ ဒေါက်တာ ဆွေဆွေအေး
၆။ ဒေါက်တာ မန်းသူဇာထွန်း
ရ။ ဒေါက်တာ ဇာဇာဝမ်းမောင်
၉။ လေးမ ( သူတစ်ယောက်ကတော့ ဗိသုကာလောကကြီးကို စိန်မခေါ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး…။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပိုင်အိမ်ကလေး တစ်လုံးကို စိတ်တိုင်းကျ ဒီဇိုင်းဆွဲဖို့ ကမ်းလှမ်းထားတဲ့ သူတော့ရှိပါတယ်…။ ပိုက်ပိုက်ပြည့်စုံတဲ့တစ်နေ့ အလုပ်အပ်ပါမယ်တဲ့… ။ လေးမရဲ့ client က ကောင်းကင်ကြီးလေ…)
အခြားလဖွားများလည်း ဇန်န၀ါရီဖွားများနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးကြပါစေရှင်…။ ။
Posted by lay-ma at 10:37 PM6comments Links to this post
လှလို့ .. စုတ်ချက်ကောင်းလို့… အရောင်စပ်ထားတာ ကောင်းလို့ ….တကယ့်အစစ်အမှန်တစ်ခုလို ခံစားရလို့ … ရသ တစ်ခုခုပေးနိုင်လို့ … ဖြေစရာတွေ အများကြီး...။
ဒါဆို … ပန်းချီကားတွေကို ကြည့်တတ်တယ်ပေါ့နော်…။
“ ကြည့်ကားကြည့်၏ … သို့သော် ..မမြင်ပါ ” ဆိုတဲ့ လူတွေများ တပုံကြီး…။
ထားပါတော့လေ … မြင်တာမမြင်တာ …နားလည်ခံစားနိုင်စွမ်းရှိတာ မရှိတာတွေ ဆန်းစစ်မနေတော့ပါဘူး…. ။
နှစ်သက်လက်ခံတယ်ဆိုရင်ပဲ ပန်းချီကားတွေက ပြုံးနေတတ်ပါတယ်…(ပန်းချီဆရာကတော့ ပြုံးချင်မှ ပြုံးမှာ…)။
ကိုယ်နေတဲ့နေရာလေး… ဒါမှမဟုတ်… ကိုယ် ကျင်လည်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပန်းချီကားလေးတွေကို မြင်နေရရင် ဘယ်လိုများနေမလဲ…။
ခံစားမှုတစ်ခုခုတော့ ပေးစွမ်းနေမှာ သေချာပါတယ်…။
ပန်းချီကား တချို က ဂုဏ်တက်စေမယ် … စိတ်အေးချမ်းစေမယ်… စိတ်ပျော်ရွှင်စေမယ်… သိမ့်မွေ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကို လှုပ်နှိုးပေးလိမ့်မယ်….
တချို က စိတ်ကိုကြမ်းတမ်းလာစေမယ်… စိတ်ရိုင်းတွေကို နိုးဆွပေးမယ် … ရူးသွပ်သွားနိုင်လောက်တဲ့ ပန်းချီကားတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်…
အမျိုးမျိုး ယူဆလို့ရတဲ့ …ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ အတွေးတွေကို ပွားထွက်လာစေတဲ့ ပန်းချီကားတွေ လည်းရှိလိမ့်မယ်…။
သေချာတာကတော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ရှိနေခြင်းဟာ အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုခုရှိနေမယ် … ရသ တစ်ခုခု ပေးနေမယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပဲ…။
အခန်းနံရံမှာ ပန်းချီကား ချိတ်ဆွဲထားဖို့ လူတိုင်း နှစ်သက်စိတ်ဝင်စားကြမှာပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူဖြစ်နေလို့ပါဘဲ …။ လူဆိုတာ ခံစားတတ် …သာယာတတ်တဲ့ သတ္တ၀ါဖြစ်နေလို့ပါပဲ…။
ဒါပေမယ့် ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းတာကရှင်….
( တချို့..တချို့တွေကလွဲရင် ) လူတွေကလေ….သူတို့တွေကလေ… ပန်းချီကားတွေကို တန်ဖိုးကြီးကြီးပေးပြီး မ၀ယ်ချင်ကြဘူး….တဲ့ ။
လက်ဆောင်ရတဲ့ ပန်းချီကားကို ၀မ်းသာအားရချိတ်ဆွဲတတ်ကြပေမယ့်…. အလကားနီပါးရတဲ့ ပန်းချီကားကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ချိတ်ဆွဲကြပေမယ့် …
ဈေးပေါပေါနဲ့ ရလာတဲ့ ပန်းချီကားကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချိတ်ဆွဲတတ်ကြပေမယ့် …
စားလို့မရ..၀တ်လို့မရ … စီးပွားရေးတစ်ခုအတွက် ကြီးမားတဲ့ အရင်းအနှီးတစ်ခုလည်းမဟုတ်တဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်အတွက် တန်ဖိုးကြီးကြီး ပေးဆပ်ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ အလွန်အမင်း တွန့်ဆုတ် တွေဝေသွားတတ်ကြပါတယ်….။ ။
“တချို့ ယောက်ျားတွေကလေ… တချို့မိန်းမတွေကလေ … ဘ၀ကို အဓိပ္ပါယ်ရှိစေမယ့် လက်တွဲဖော်တွေကို လက်တွဲဖို့အတွက် … ကိုယ့်ယုံကြည်ချက် … ပတ်ဝန်းကျင် …အသိုင်းအ၀ိုင်း… အချိန် … လွပ်လပ်မှုတွေကို ပေးဆပ်လိုက်ရမှာ တွန့်ဆုတ်တွေဝေနေကြတယ် …” လို့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်က တိုးတိုးလေး လာပြောသွားတယ်…။ ။
Posted by lay-ma at 1:38 AM 11 comments Links to this post
(လှတယ်နော် ... ကြောင်ကုန်ပဏီက လေ)
စိုးထက် - Soe Htet !, on January 18th, 2008 at 8:33 am Said:
Posted by lay-ma at 1:48 AM 26 comments Links to this post
အနွေးထည်ထူလည်း ၀တ်ခဲ့ပါရဲ့ …
အပူကာတွေ အစုံယူခဲ့ပါရဲ့ …
Posted by lay-ma at 4:30 AM 11 comments Links to this post
Posted by lay-ma at 6:31 PM 17 comments Links to this post
Labels: Link to the past, personal
Posted by lay-ma at 9:31 PM 16 comments Links to this post
အဆောင်က မိန်းကလေးတစ်ချို့ရဲ့ ဘယ်တစ်ယောက်နဲ့ ဘယ်သူနဲ့ ကြိုက်သွားမလဲ ဆိုတဲ့ ခပ်တိမ်တိမ်အတွေးတွေကို မောင်နှမလို … သူငယ်ချင်းလို အဖြူရောင် သံယောဇဉ်တွေက အပြတ်အသတ်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်…။ နောက်တော့ ကျောင်းတွေ…အလုပ်တွေနဲ့ ဝေးကွာသွားလိုက်တာ ခုထိ ပြန်မဆုံကြတော့ဘူး...။
Posted by lay-ma at 2:33 AM 12 comments Links to this post